टि–१० क्रिकेट लिगः सन्दीप महंगा सावित ! [LIVE] - Everest Dainik - News from Nepal
टि–१० क्रिकेट लिगः सन्दीप महंगा सावित ! [LIVE]
काठमाडौं, मंसिर । यूएइमा जारी टि–१० क्रिकेट लिगमा यसअघिका तीन खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले आजको खेलमा भने महंगा सावित भए ।
पहिलो ओभरमा १८ रन खर्चिएका उनले दोस्रो ओभरमा १० रन दिए । आज सन्दीपले विकेट लिन सकेनन् । यसअघिका तीन वटै खेलमा उनले विकेट लिन सफल भएका थिए ।
लामिछानेको टिम केरला नाइट्सले अहिले पञ्जाव लेजेण्ड्सँग खेलिरहेको छ । आज सन्दीपको टिमले टस जितेर बलिङ रोजेको छ । साविकको विजेता समेत रहेको केरलाले पहिलो खेलमा जित निकालेको थियाे । भने, दोस्रो खेलमा हार र तेस्रो खेलमा अंक बाँडेको छ ।
याे पनि पढ्नुस एसिया कप छनोटः सिंगापुरको इनिङ धरापमा, आठौं विकेट गुम्यो ! [अपडेट]
सन्दिपले पहिलो खेलमा तीन, दोस्रो खेलमा एक र तेस्रो खेलमा तीन विकेट लिइसकेका छन् । सन्दीप पहिलो खेलमा ‘म्यान अफ द म्याच’ समेत बनेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस सन्दीपले ट्वीट गर्दै दिल्ली डेयर डेभिल्सलाई यस्ताे भने...
याे पनि पढ्नुस टि–१० क्रिकेट लिगः सन्दीप आज पनि महंगा सावित ! [LIVE]
ट्याग्स: sandeep lamichhane, T-10, T-10 leauge